Iran: Hahavoha Ny Varavarana Rehetra Ve Ny Lakilen’ny Filoha Vaovao? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 15 Jolay 2013 4:46 GMT
Vakio amin'ny teny বাংলা, فارسی, Swahili, Nederlands, Français, Español, English
Lakile no sariohatry ny fampielezan-kevitr'i Rouhani. Sary avy amin'ny Mashreghnews
Lakile no natao sariohatry (symbole) ny fampeielzan-kevitry ny filoha voafidy Hassan Rouhani. Ankehitriny kosa eo ampiadiana hevitra ny mpiserasera Iraniana raha mahasokatra hidim-baravarana tokoa i Rouhani. Nampanantena governemantam”-panantenana sy fahamailoana” i Rouhani, ary an'arivony ny Iraniana nankalaza ny fandreseny tao anatin'ny fiandrandrana hoavy tsaratsara kokoa.
Ao amin'ny bilaogin'i Omid Dana no hamakiantsika:
Inona ny hidim-baravarana ho voavohan'ny lakilen'i Rouhani? Miteny i Mostafa Tajzadeh fa tsy eoam-pelatanan'i Rouhani ny famotsorana ny gadra politika. Moa tsy efa niteny i Khatami fa tokony ampidinintsika kokoa ny fanantenantsika? Efa niteny matetika, tamin'ny alalan'ny fanehoan-kevitra mafonja, ny olona fa ny lakilen'ny fifampiraharahana, fifandraisana amin'i Etazonia ary ny krizin'i Syria dia eo am-pelatanan'ny Mpitarika Faratampony… Raha voalaza daholo izany rehetra izany, ny hany lakilen'i Rouhani dia ny any an-tranony na birao fiasany ihany.
Manoratra i Jaleboon:
Manontany ny sasany,tahaka an'i Omid Dana hoe inona ny hidim-baravarana voavahan'i Rouhani. Ny valiny dia efa voasokany ny hidim-baravaran'ny fifidianana izay lasa tsy ara-drariny tamin'ny krizin'ny 2009.
Manamarika ny olana sy hidim-baravarana izay mety ho voasokatry ny lakilen'i Rouhani ny mpiserasera maro.
Nisioka i Mahsa :
Tsy resaka fahafahana manao voaly na tsia no tadiaviko, fa ny fahatongavan'ny andro mampihena ny fahalafosam-bidin-javatra sy ny tsy fananan'asa ary tsy mila mivarotra rongony intsony ny olona natao an-jorombala.
Nisioka i Negar Mortazavi:
Loharanom-baovao akaiky an'i #Rouhani no milaza fa mikasa ny handefa iraka manoakana any amin'ny firenena sasantsasany izy hanohy ny fifandraisana tapaka sy hanomboka pejy (toko) vaovao miaraka amin'i Iran.
Mandritra izany fotoana izany, maro ny fifanentanana miangavy ihany koa an'i Rouhani hanatsara ny Aterineto Iraniana sy hampitsahatra ny fanivanana. Misy ny fanentanana amin'ny Facebook mitaky amin'i Rouhani hampitsahatra ny fanivanana ny Facebook, ary misy vondrona bilaogera sy mpikatroka an-tserasera nanoratra taratasy tamin'ny filoha voafidy hampakarany ambony kokoa ny halakin'ny aterineto. Mitaraina momba ny fanivanana ihany koa izy ireo ary mampahatsiahy fa na izy tenany aza dia nampiasa ny aterineto ihany koa hampisongadina ny fampieleza-keviny.